आर्यन र श्रृष्टीको फ्लप स्टारडमबाट आशा के गर्ने ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGossipआर्यन र श्रृष्टीको फ्लप स्टारडमबाट आशा के गर्ने ?
अभिनेता आर्यन अधिकारीलाई के म तिम्रो होइन र बाट दर्शकले चिनेका हुन् । तर, बटरफ्लाइसम्म आउँदा त उनलाई दर्शकले विर्सिए । आर्यनको नाममा हलमा दर्शक जान्छन् भन्न सकिन्न ।अभिनेत्री श्रृष्टी श्रेष्ठलाई दर्शकले मिस नेपाल भएपछि चिनेका हुन् ।
मिस नेपाल भएपछि उनले गाजलु सिनेमामा काम गरेकी थिइन् । गाजलु हिट भएपनि श्रृष्टीलाई मान्छेले नोटिस कम गरे । दोश्रो सिनेमा रोमियो एन्ड मुना २ बर्षपछि आयो । फिल्म सुपरफ्लप । आर्यन र श्रृष्टीले काम गरेको दोश्रो सिनेमा फ्लप छ । यसले के वुझियो भने, यी दुबैले कुनै खालको स्टार फेस कमाउन सकेका छैनन् । यी दुबै फ्लप कलाकारलाई लिएर निर्देशक सविर श्रेष्ठले बाँध मायाले बनाएका छन् । असोज ५ गते सिनेमा रिलिज हुँदैछ ।
सविर आफैमा दर्शकले रुचाएका निर्देशक होइनन् । मल्टिप्लेक्स हलमा त उनको कुनै परिचय बनेको छैन । सिंगल हलमा पनि उनी रेखा थापा राखेर दर्शक तान्न सिपालु थिए । सविरको ” कसले चो¥यो मेरो मन ” बाहेक अर्को सिनेमाले प्रशंसा पाएको छैन । कही कतै उनको साउनमा रिलिज भएको सिनेमा हो, जुन आएको र गएको थाहा भएन ।
बाँध मायाले चल्छ भन्नेमा त २ कलाकार र सविरमा आशा छ । तर, इन्टु मिन्टु लण्डनमा जस्तो उच्च क्रेज बनाएको सिनेमाको अगाडि, आर्यन अधिकारी र श्रृष्टीको फेसले काम गर्नेमा शंका नै छ ।
धिरज मगर र साम्राज्ञीको हावाले बाँध मायालाई उडायो भने, आश्चर्यमा नपर्दा नै फाइदा हुनेछ ।
जापानको टिकट छोड्दा प्रदिपलाई लड्डु !